Eid Al Adha sy ny nankalazan’ny malagasy eto Egypta azy ! – Gasy Egypte
Naharitra 4 andro ny fankalazana.
Nanomboka ny alakamisy ariva ny 30 jolay ka Nifarana alatsinainy ariva ny 3 Août,
Maro amin’isika malagasy no tsy tena mahafantatra izany Eid Al Adha izany fa faly fotsiny hoe andro tsy fiasana sady andraisan-karama
Ao anatin’ity lahatsoratra ity no hitondrana fahalalana kely momba izany. Andao ary eh !
Inona Eid Al adha izany ?
Eid Al adha na “festival of sacrifice” dia an’isany fankalazana lehibe indrindra eo amin’ny finoana silamo.
Aty Egypta sy any amin’ireo firenena, anisan’izany Madagascar, dia natao andro tsy fiasana io fotoana io.
Tantara fohy ao amin’ny Coran !
Araho ary !!
Famakiana tantara sy fanazavana avy ao amin’ny Coran
Ao anatin’ny Coran dia misy ny tantara an’ny mpaminany Ibrahim.
Ibrahim moa dia olona be finoana.
Indray andro notsapain’Andramanitra izy ary nasaina nanao sorona ny zanany lahy voalohany Ismail. Natoky an’Andriamanitra tokoa i Ibrahim ka nandeha anatanteraka ny sitrapony. Tamin’izany anefa dia nanolotra ondry Andriamanitra natao sorona ho solon’i Ismail.
Fankakazana ny Eid Al Adha ?
Atomboka amin’ny vavaka moa ny Eid al adha. Azo lazaina hoe fotoana iray izany hafahan’ny fianakaviana miara-mifaly amin’io fotoana io.
Amin’io fety io ko moa izany dia fanararaotana mihinana hena.
Misy ny fanaovana sorona ondry, osy, rameva, na omby. Ny Eid al adha ihany koa dia fotoana fanaovana asa soa. Ireo olona izay manana ny ho zaraina dia manolotra hena na vola hoan’ireo sahirana sy tsy manana.
Nanao ahoana amin’izay ary ny fetin’ny malagasy eto egypta ?(eid al adha 2020)
Natomboka tamin’ny famakiana Coran ny alakamisy ariva. Ny zoma indray dia samy nijanona tany atranony avy niaraka tamin’ny ankohonany tsirairay avy.
Tonga amin’izay ny sabotsy izay nanaovana ny fety sy ny sorona. Osy moa no natao sorona.
Izany fety izany moa dia tanteraka soa aman-tsara noho ny fiaraha-miasa nisy teo amin’ny FMME sy ireo Malagasy sy vahiny malala-tanana. Kanefa iany koa raha tsy teo ny firaisan-kina ny Malagasy eto Egypta dia zava-poana iany izany.
N.B Somary niavaka moa ny Eid Al adha tamin’ity 2020 ity noho ny covid-19 fepetra tsy maintsy narahana ho fiarovana ny olona tsirairay avy.
Les Chroniques de Mihaja, Place au Caire, Vaovao